[Sunday, December 9th, 12] :: Dawlada Denmark oo doonaysa in ay macalimiintu kordhiyaan saacadaha ay Kalaaska ku jiraan ee ay wax dhigayaan.
RH: Kobanhagen: Hadda macallimiinta dugsiyada hoose/dhexe ayaa wiiggii celcelis ahaan shaqeeyaa 16 saacadood. Dawladda ayaa hindisaheeda dibuhabaynta ku rabta, in macallimiintu wax dhigaan 18 saacadood - taasoo ay macallimiintu ilaa hadda diiddan yihiin.
Laakiin arrintaasi waa ilaa maanta uun.
DR Nyheder ayaa fursad u helay inuu arko qoraal ay sameeyeen ururka macallimiinta, oo cinwaankiisu yahay 'Ka dhig dugsiga mid ka sii fiican' - oo toos looga soo tixraacay halkudhigga dibuhabaynta dawladda ee ah 'ka dhig dugsiga mid fiican'.
Halkan waxa cad arrin la yaab leh, oo ah in hindisaha dibuhabayntu loogu daray xiisadaha dugsiga iyo nusasaacayaasha, in macallimiintu shaqeeyaan ilaa 25 saacood wiiggii - taasoo sagaal saacdood ka badan inta ay manta shaqeeyaan.
Waxa intaas dheer waxbarashada ardayda oo maamulha dugsigu goaaminayo, in macallimiintu qabtaan hawlo rugkubeedka ah, ama siiyaan latalin iwm ardayda, taasoo qayb ka ah waxbarashada, sida ku xusan qoraalka.
Waxay rabaan waxbarasho dheeraad ah
- Arrinta ahmiyadda noo leh annagu waxay tahay: iiinnn aanu dib uga fikiri karno yoolka la xidhiidha maalin dugsiyeedka, arrimaha baraktig ah, iyo waqtiga si xeeldheer loo gggeeelayo arrimaha. Teeda kale wax baanu u heli karaa 25ka saacadood, waayo waannu u soo diyaarinay, ayuu DR Nyheder ku yidhi guddoomiyaha ururka macallimiinta, Anders Bondo Christensen.
Laakiin waxbarashadaas dheeraadka ahi maaha bilaash. Waxa ururka macallimiintu soo jeediyay, in macallimiinta oo dhan loo oggollaado, inay sii korodhsan karaan waxbarashada sagaal cisho sannadkii, taasna ay bixiyaan dawladda iyo degmooyinka iyo ururka degmooyinka dalku (KL).
Wasiirka oo dhawaysay
Wasiirka carruurta iyo dhallinyarada, Christine Antorini (S), ayaa soo dhawaysay farriinta ka soo baxday macallimiinta.
- Waa arrin wanaagsan, in ururka macallimiintu sidan togan u soo dhaweeyay ajandahayaga dibuhabaynta, ayay tidhi wasiirku.
Wax faallo ah kama ay bixin dalabka la xidhiidha waxbarashada dheeraadka ah.
Hindisaha oo dhan ayaa ururada lookalka ah ee macallimiinta loo soo bandhigayaa khamiista, waxana la filayaa in arrintu isafgarad ku dhammaato.
posted on Sunday, December 9th, 12